ဂါးရတ်ဘေးလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးစကား ဆိုသွားတဲ့ နည်းပြဟောင်း #မြူလန်စတင်း — Sports Myanmar
ဂါးရတ်ဘေးလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးစကား ဆိုသွားတဲ့ နည်းပြဟောင်း #မြူလန်စတင်း
ဆာ အဲလပ်စ် နဲ့ အတူ လက်တွဲ အလုပ် လုပ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ ရီနီ မြူလန်စတင်း က လက်ရှိ အချိန် မှာ ဝေးလ် လက်ရွေးစင် ရဲ့ အစွမ်းအစ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာ ချင့်ချိန် ဖို့ ခက်ခဲ နေတဲ့ အချိန် ၊ ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေကြား ရုန်းကန် နေရတဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး အတွက် စွန့်စားမှု မပြုလုပ် ဖို့ အသင်း ဟောင်း ကို သတိပေး သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း မှာ6နှစ်ကြာ ကစား ခဲ့တဲ့ နောက် ရုန်းကန် နေခဲ့ ရတဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တွေ ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ရတဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂါးရတ် ဘေးလ် ဟာ အသင်း ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ ရေပန်းစား နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် နည်းပြ ဇီဒန်း ဟာလည်း အသင်း ရဲ့ အနာဂတ် စီမံကိန်းထဲ ဘေးလ် ကို နေရာ ပေး ထည့်သွင်း ထားခြင်း မရှိဘူး လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
လက်ရှိ ယူရို 2020 အတွက် ခြေစစ်ပွဲ ကစားဖို့ ဟန်ဂေရီကို ရောက်ရှိ နေတဲ့ ဝေးလ် လက်ရွေးစင် ဟာ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှ ရေရာတဲ့ စကား မပြော ထားသေး ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း ရဲ့ ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ဟာ ပရီးမီးယား လိဂ်ဆီ ပြန်လည် ရောက်ရှိ ဖို့ ရေပန်းစား နေခဲ့ ပြီး သူ့ကို ခေါ်ယူ ဖို့ အတွက် ယူနိုက်တက် က ထိပ်ဆုံးမှ သတင်းထွက် နေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် 11 နှစ် အကြာထိ နည်းပြ တစ်ဦး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ထား ခဲ့ ဖူးတဲ့ မြူလန်စတင်းက နောက်လမှာ အသက် 30 ပြည့်တော့မယ့် ဂါးရတ် ဘေးလ် ရဲ့ ခြေစွမ်း ၊ ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေနဲ့ ပတ်သက် လို့ မေးခွန်းတွေ ထုတ်ရင် အသင်းဟောင်း ကို သတိပေး စကား ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ခင်ဗျား တို့တွေ ကတော့ အသင်း ဆီကို နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူ ရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပြောဆို ကြမှာ အသေ အချာ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဂါးရတ် ဘေးလ် က အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း တွေ ပိုင်ဆိုင် ထားသေး ရဲ့လား ? သူဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေ အကြား မကြာခန ရုန်းကန် နေခဲ့ ရတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး ကောင်းကောင်း သိရှိ ထားခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို ခေါ်ယူ မယ် ဆိုတာ စွန့်စား မှု တစ်ရပ် ပါပဲ ” လို့ မြူလန်စတင်း က သတိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘေးလ် ကသာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ မှာ ဆက်လက် ရှိနေ သေးရင် တော့ ဒါဟာ ယူနိုက်တက် တို့ သူ့ကို ခေါ်ယူ ရာမှ အကျိုးအမြတ် တွေ ရရှိ သွားနိုင် လိမ့်မယ် လို့ မြူလန်စတင်းက အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ စကား ကိုပါ ဆက်လက် ဆိုသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
” ဒါပေမယ့် အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ထိပ်တန်း အဆင့် အရည်အသွေး တွေ ရှိနေ တဲ့ ဂါးရတ် ဘေးလ် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် တော့ တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ ခေါ်ယူမှု တစ်ရပ် ဖြစ်သွား ပါ လိမ့်မယ် ။ သူဟာ အသင်း ဆီ ခွန်အား တွေ မြန်ဆန် မှုတွေ ယူဆောင် လာနိုင် သလို သွင်းဂိုး တွေနဲ့ ဂိုး ဖန်တီးမှု တွေကို ပါ ယူဆောင် လာနိုင် ပါတယ် ”
” ဆိုးတာ တစ်ခု ကတော့ သူရဲ့ ခြေစွမ်း တွေဟာ လက်ရှိ ဘယ်လို အနေအထား မျိးမှာ ရှိနေ သလဲ ဆိုတာ ချင့်ချိန် မှန်းဆ နိုင်ဖို့ အရမ်း ခက်ခဲ နေခြင်း ပါပဲ ” လို့ မြူလန်စတင်း က အဆုံးသတ် ပြောကြား သွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဂါးရတျဘေးလျနဲ့ပတျသကျလို့ ယူနိုကျတကျကို သတိပေးစကား ဆိုသှားတဲ့ နညျးပွဟောငျး #မွူလနျစတငျး
ဆာ အဲလပျဈ နဲ့ အတူ လကျတှဲ အလုပျ လုပျခဲ့ ဖူးတဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဟောငျး တဈဦး ဖွဈသူ ရီနီ မွူလနျစတငျး က လကျရှိ အခြိနျ မှာ ဝေးလျ လကျရှေးစငျ ရဲ့ အစှမျးအစ ဘယျလောကျ ရှိသလဲ ဆိုတာ ခငျြ့ခြိနျ ဖို့ ခကျခဲ နတေဲ့ အခြိနျ ၊ ဒဏျရာ ပွသနာ တှကွေား ရုနျးကနျ နရေတဲ့ ကစား သမား တဈဦး အတှကျ စှနျ့စားမှု မပွုလုပျ ဖို့ အသငျး ဟောငျး ကို သတိပေး သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး မှာ6နှဈကွာ ကစား ခဲ့တဲ့ နောကျ ရုနျးကနျ နခေဲ့ ရတဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တှေ ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ ရတဲ့ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ ဂါးရတျ ဘေးလျ ဟာ အသငျး ပွောငျးရှေ့ ဖို့ ရပေနျးစား နခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ နညျးပွ ဇီဒနျး ဟာလညျး အသငျး ရဲ့ အနာဂတျ စီမံကိနျးထဲ ဘေးလျ ကို နရော ပေး ထညျ့သှငျး ထားခွငျး မရှိဘူး လို့ သိရှိ ရ ပါတယျ ။
လကျရှိ ယူရို 2020 အတှကျ ခွစေဈပှဲ ကစားဖို့ ဟနျဂရေီကို ရောကျရှိ နတေဲ့ ဝေးလျ လကျရှေးစငျ ဟာ အနာဂတျ နဲ့ ပတျသကျလို့ ဘာမှ ရရောတဲ့ စကား မပွော ထားသေး ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ တော့တငျဟမျ ဟော့ စပါး အသငျး ရဲ့ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ဟာ ပရီးမီးယား လိဂျဆီ ပွနျလညျ ရောကျရှိ ဖို့ ရပေနျးစား နခေဲ့ ပွီး သူ့ကို ချေါယူ ဖို့ အတှကျ ယူနိုကျတကျ က ထိပျဆုံးမှ သတငျးထှကျ နခေဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး အတှကျ 11 နှဈ အကွာထိ နညျးပွ တဈဦး အဖွဈ တာဝနျ ထမျးဆောငျ ထား ခဲ့ ဖူးတဲ့ မွူလနျစတငျးက နောကျလမှာ အသကျ 30 ပွညျ့တော့မယျ့ ဂါးရတျ ဘေးလျ ရဲ့ ခွစှေမျး ၊ ဒဏျရာ ပွသနာ တှနေဲ့ ပတျသကျ လို့ မေးခှနျးတှေ ထုတျရငျ အသငျးဟောငျး ကို သတိပေး စကား ဆိုသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
” ခငျဗြား တို့တှေ ကတော့ အသငျး ဆီကို နာမညျကွီး ကစားသမားတှေ ချေါယူ ရေးနဲ့ ပတျသကျ ပွီး ပွောဆို ကွမှာ အသေ အခြာ ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ဂါးရတျ ဘေးလျ က အကောငျးဆုံး ခွစှေမျး တှေ ပိုငျဆိုငျ ထားသေး ရဲ့လား ? သူဟာ ဒဏျရာ ပွသနာ တှေ အကွား မကွာခန ရုနျးကနျ နခေဲ့ ရတယျ ဆိုတာ ကြှနျတျော တို့ အားလုံး ကောငျးကောငျး သိရှိ ထားခဲ့ ကွ ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူ့ကို ချေါယူ မယျ ဆိုတာ စှနျ့စား မှု တဈရပျ ပါပဲ ” လို့ မွူလနျစတငျး က သတိပေး သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဘေးလျ ကသာ အကောငျးဆုံး ပုံစံ မှာ ဆကျလကျ ရှိနေ သေးရငျ တော့ ဒါဟာ ယူနိုကျတကျ တို့ သူ့ကို ချေါယူ ရာမှ အကြိုးအမွတျ တှေ ရရှိ သှားနိုငျ လိမျ့မယျ လို့ မွူလနျစတငျးက အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျတဲ့ စကား ကိုပါ ဆကျလကျ ဆိုသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
” ဒါပမေယျ့ အခွား တဈဖကျ မှာတော့ ထိပျတနျး အဆငျ့ အရညျအသှေး တှေ ရှိနေ တဲ့ ဂါးရတျ ဘေးလျ ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး အတှကျ တော့ တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ လှတဲ့ ချေါယူမှု တဈရပျ ဖွဈသှား ပါ လိမျ့မယျ ။ သူဟာ အသငျး ဆီ ခှနျအား တှေ မွနျဆနျ မှုတှေ ယူဆောငျ လာနိုငျ သလို သှငျးဂိုး တှနေဲ့ ဂိုး ဖနျတီးမှု တှကေို ပါ ယူဆောငျ လာနိုငျ ပါတယျ ”
” ဆိုးတာ တဈခု ကတော့ သူရဲ့ ခွစှေမျး တှဟော လကျရှိ ဘယျလို အနအေထား မြိးမှာ ရှိနေ သလဲ ဆိုတာ ခငျြ့ခြိနျ မှနျးဆ နိုငျဖို့ အရမျး ခကျခဲ နခွေငျး ပါပဲ ” လို့ မွူလနျစတငျး က အဆုံးသတျ ပွောကွား သှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။